Cabdirashiid Janan oo safar dhulka ah galabta uga baxay Soomaaliya – Hornafrik Media Network
Wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan ayaa waxa uu galabta iskaga baxay magaalada Beled-Xaawo ee gobolka Gedo oo galinkii hore ee maanta uu ka degay, kadib markii uu ka soo duulay magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Xubno ka tirsan maamulka degmada Beled-Xaawo ayaa noo sheegay in wasiir Cabdirashiid Janan uu dhulka ah ku gaaray magaalada Mandheera ee gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya, in kastoo ay faahfaahin intaas ka badan ka bixin socdaalka uu Janan ku gaaray Mandheera.
Cabdirashiid Janan ayaa maanta muddo saacado ah ku sugnaa Beled-Xaawo oo uu ku yimid diyaarad militeri oo ka soo qaaday Nairobi, waxuuna soo dhaweyn kadib kulamo la qaatay, sarakiisha ciidamada, maamulka degmada iyo bulshada ku nool Beled-Xaawo, isagoo galabta u baxay dhanka magaalada Mandheera ee dalka Kenya.
Intii uu maanta wasiir Janan ku sugnaa magaalada Beled-Xaawo, war kasoo baxay dowladda Soomaaliya, gaar ahaan Taliska Booliska ayaa lagu jaray waaran caalami ah oo lagu soo qabanayo wasiir Janan oo 28-kii Janaayo ka baxsaday meel uu uga xirnaa Muqdisho.
Isniintii shalay ee 3-dii bishan hey’adda xuquuqda Aadanaha ee Amnesty International ayaa ugu baaqday dowladda Kenya inay qabato Cabdirashiid Janan, sla markaana ay u gacan galiso dawladda Soomaaliya si loo maxkamadeeyo, xilligaas oo uu ku sugnaa magaalada Nairobi.